Amanqaku kaSarah Saker Martech Zone |
Amanqaku ngu USarah Saker
Baninzi abathengisi be-ecommerce phaya-kwaye ungomnye wabo. Ukho kuyo ixesha elide. Kananjalo, kuya kufuneka ubenakho ukukhuphisana nezona zilungileyo kumakhulu amawaka ezivenkile ezikwi-Intanethi okwangoku ezikwi-Intanethi. Kodwa uyenza njani loo nto? Kuya kufuneka uqiniseke ukuba iwebhusayithi yakho inomdla kakhulu. Ukuba ayenziwanga kakuhle, ayinalo igama elihle,